Karoora Galii fi Baasii Mootummaa - Oromia Planning and Economic Development Commission
Galiin idilee Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2008 keessa qar.bil.10.445 irra ture guddina %14.8 agarsiisuun bara 2009tti qr.bil.12.00 ni sasaabama jedhamee kan karoorfame ta’us, tilmaama hanga ammati jiruun qr. bil. 10.4 walitti qabama jedhamee yaadama. Bara 2010 keessatti waliigalaan galii idilee mootummaa naannoo Oromiyaa qar. bil.13.2 walitti qabuuf karoorfameera. Tilmaama kanaaf ka’uumsa kan ta’e guddina diinagdee bara baraan naannichaan galmaa’aa jiru galiiwwan idilee heera mootummaa mootummaa Feedeeraalan naannoolee akka sassaban heyyamameef bu’uura godhachuun guddna“Tax- GDP ratio” naannoo keenyaa fudhachuun tilmaama gaggeeffameen gara qr.
bil.13.3 akka sassaabun danda’amu agarsiisa. Akkasumas,tilmaama galii guyyaa kaffaltoota gibiraa bara 2009keessa gaggeeffamee fi fooyya’iinsa mindaa hojjettoota mootummaa bara 2009 keessa taasifamee galii naannichaa bara 2010 keessatti dabaluuf shoora ol’aanaa qabu. Kanaan alattis, galiinaannichaa seeraan akka sassabamu kaffaltoota gibiraa barsiisuu , kaffaltootaa gibiraa “VAT” sassaabuuf hin galmoofne akka sassaaban taasisuu,sirna walitti qabinsa galii haala qindominaa fi iftoomina qabuun hojii irra oolchuufi hordoffii fi to’annoo cimsuu…kkf rawwatamuu qabu.
Gama biratiin, bara 2009tti galii keessaa qr. bil.2.034 walitti qabama jedhamee kan tilmaamame bara 2010tti gara bil. 2.55tti akka guddatu ta’eera.Galii idilee naannoon walitti qabuun alatti galii mootummaa naanno keessatti ga’ee guddaa kan qabu deeggarsa baasii Mootummaa Feedeeraalaa irraa argamu yoo ta’u, galiin madda kana irraa argamu bara 2009 fi 2010 gidduutti guddina %21.38 agarsiisuun bara 2010tti qr.bil.39.7 gahee jira.
Gabatee 2.1: Karoora Galiiwwanii mdda adda Naannoo bara 2010 (bil.)
Baajata bara 2009 labsame
Manii KGT -II keessaa 2010
Karoora manii 2010
Tilmaamni baasii mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2009tti qr.bil.52.29 irraa guddina %6.7agarsiisuun bara 2010tti gara qr.bil.55.8 akka guddatuu tilmaameera. Baasiin kun baajata milkaa’ina maniiwwan misooma itti fufiinsaaf ramadamu akka itti fufutti yaaduudhaan hundamtaa baasii mootummaa bara 2010f tilmaamame ta’a.
Hundamtaa baasii mootummaa keessatti dhimmi xiyyeeffannoo cimaa barbaadu tokko baasii seektaroota hiyyumaa hir’isuuf gargaaran jalatti ramadamu yoo ta’u, baasiin kun tajaajila hawaas-dinagdee hawaasa bal’aa biraan ga’uun jiruu fi jireenya hawaasa fooyyessuuf kan gargaaru dha. Kanuma irraa ka’uun sekteroota hiyyummaa hir’isuuf gargaaru jedhamanii adda bahaniif ramaddii baajataa keessattis ta’ee hojiirra oolmaa baajata ramadamee fooyyessuu irratti xiyyeeffannoon addaa kennameefii hojjetamaa tureera.